Amadoda aQinisekileyo Kwavela ngo-2008 njengenyathelo elalifuna ukubandakanya yonke imiba efanelekileyo kwindoda kwikona enye. Ngale ndlela, injongo yethu kukuba abasebenzisi bale webhusayithi bakwazi ukugcina kufanelekile, banxibe ngokufanelekileyo kwaye bagcine ucoceko olululo kunye nokhathalelo lomntu. Ngamafutshane, abo basebenzisi be-Intanethi banamadoda anesitayile se-axis yesalathiso kwi-Intanethi.
Ngokwendalo, oku kunokwenzeka kuphela enkosi kwiqela lokuhlela elingasemva kweHcE, onokulufumana apha ngezantsi. Ukuba ucinga ukuba unganegalelo kwindawo yethu kwaye ufuna ukujoyina eli qela labahleli, ungaqhagamshelana nathi apha. Ungandwendwela icandelo lethu amacandelo, apho unokufunda onke amanqaku esiye sawapapasha kule minyaka idlulileyo.
Kuliwonga ukukwazi ukunika elona cebiso lilungileyo ngesitayile, inkathalo kunye nendlela yokuphila emadodeni. Ndinomdla ngayo yonke into enxulumene nehlabathi lakhe kwaye ndinako ukufumanisa ukungabikho kwezithambiso kunye nezinto ezahlukeneyo ezikhoyo kwifashoni yakhe. Fumanisa yonke into onokuyifumana kunye neengcebiso ezithile kunye namacebo endiwacebisayo apha.
Ndiyathanda ukuphila ubomi obunempilo, ukwenza umthambo kunye nokutya ukutya okusempilweni. Ngenxa yoko, ndihlala ndinolwazi malunga nemicimbi yezempilo ngokubonisana neendaba ezahlukeneyo. Ndinomdla wokwabelana nayo yonke into endiyifundayo kwimithombo yam.
Ndiyalithanda ilizwe lokuphila okunempilo, ngakumbi izihloko ezinxulumene nokuba sempilweni kunye nesondlo. Soloko ulandela umgaqo we 'Mens sana kwi-corpore sana'. Kwaye ngombono wesayensi. Ukongeza, ndinoqeqesho kwezempilo kunye nemiba yokuthintela umngcipheko, kunye nolawulo lokusingqongileyo kwiinkampani. Into ebalulekileyo, kuba awufumani mpilo ngaphandle kwendalo esempilweni.
Ndingumqeqeshi kunye nezemidlalo kwezondlo. Kudala ndizinikela kwilizwe lokomelela kunye nesondlo iminyaka kwaye ndinomdla ngayo yonke into ngayo. Kule bhulogi ndiziva ngathi ndinokufaka isandla lonke ulwazi lwam malunga nokwakha umzimba, indlela yokutya okuchanekileyo kungekuphela nje ukufumana umzimba olungileyo, kodwa ukufumana impilo.
Ndinomdla kwifashoni yamadoda. Ukuba uthanda ukugcina usesikhathini nayo yonke into eyenzekayo malunga nefashoni kunye nobuhle kumadoda ke ndiyacebisa ukuba ufunde amanqaku am.
Uzalelwe eMalaga ngo-1965, uFausto Antonio Ramírez uhlala enegalelo rhoqo kwimidiya eyahlukeneyo yedijithali. Umbhali osibalisayo uneempapasho ezininzi kwintengiso. Ngoku usebenza kwinoveli entsha. Ukuthanda umhlaba wefashoni, impilo yendalo, kunye ne-aesthetics yamadoda, usebenze kwimidiya eyahlukeneyo ekhethekileyo kulo mbandela.
Isitayile, umthengisi obonwayo kunye nomhleli wefashoni kunye nendlela yokuphila. Okwangoku ndisebenzisana namafemu ahlukeneyo kunye namajelo eendaba njengesiqhelo. Ungandilandela kwibhlog yam kwaye, ewe, undifunde 'Kumadoda aneSimbo'.